देशैभरी छरिएर रहेका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि एकाबिहानै आयो अत्यन्तै खुसिको खबर ! – AB Sansar
September 30, 2020 adminLeaveaComment on देशैभरी छरिएर रहेका सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि एकाबिहानै आयो अत्यन्तै खुसिको खबर !
साथै, भ्वाइस सेवा, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट चलाउन ५ जिबी डाटा सेवा र बल्क एसएमएस सुविधा समेत उपलब्ध गराइने छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइट (www.learning.cehrd.edu.np) मा कक्षा १ देखि १० सम्मको सबै पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीहरु उपलब्ध हुनेछ । मासिक ९९ रुपैयाँमा भ्याट, टीएससी, ओटी कर थपिने नेप
नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ बमोजिम विद्यालय जाने बालबालिकाहरुलाई आफ्नो अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सँग समन्वय गरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाई सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि कम्पनीको प्रिपेड मोबाइल ‘पाठशाला सीयूजी सिम’ निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो
युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ?
दै’वपनि कति नि’ष्ठुरी: पोखरामा जन्मने बितिकै एक शिशुमा को’रोना देखियो !
भागरथीको ब’ला’त्का’रपछि ह’त्या गरेको दिनेशले स्वीकारे